Dhaalibaan oo weerartay Xaafad u gaar ah Shisheeyaha oo ku taalla Kaabul. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhaalibaan oo weerartay Xaafad u gaar ah Shisheeyaha oo ku taalla Kaabul.
On Sep 3, 2019 436 0
Habeennimadii xalay, rag naftood huriyaal ah oo katirsan Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa weerar culus ku qaaday xaafad ku taalla bartamaha magaalada Kaabul, oo u gaar ah hay’adaha Shisheeyaha ee qeybta ka ah duulaanka wadankaas ay ku qaadeen ururka NATO.
Nafti hure katirsan Dhaalibaan ayaa qarax ku daah furey weerar lagu qaaday xaafadda Green Willich ee Kaabul, waxaana xigay in dagaalyahanno hubeysan ay u daateen xarumaha muhiimka ah ee ku yaala xaafadaas.
Afhayeenka Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan Dabiixullaahil Mujaahid, wuxuu shaaca ka qaaday in dagaalyahannadooda ay ku guuleysteen iney gudaha u galaan goobta la beegsanayay, halkaasna ku dilaan tobanaan ruux oo Shisheeye ah.
Wasiirka arimaha gudaha ee Xukuumadda Kaabul oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weerarka uu soo gebegeboobay, balse taasi weli kama hadlin Dhaalibaan.
Dadka oo careysan ayaa dalbanaya iney Shisheeyaha ka guuraan xarunta, maadama ay soo noq noqdeen weerarada ay Dhaalibaan kusoo qaadeyso.
“Dhibka ugu weyn ee aan qabno waa Ajaaniibta, uma baahnin ee hanaga guuraan” ayaa waxaa yiri mid kamid ah dadka la hadlay wakaaladda wararka ee Faransiiska.
Weerarkan ayaa qeyb ka ah howlgalka Al-fatxi ee ka socda wadanka Afqaanistaan, waxaana uu kusoo aadayaa, iyadoo Maraykanku sheegayo inuu xilliyada soo aadan isaga bixi doono dalka Afqaanistaan oo idil.